Saaka & Dunida iyo Axmed Shiikh Maxamed awTall (dhegayso) – Radio Daljir
Saaka & Dunida iyo Axmed Shiikh Maxamed awTall (dhegayso)
May 18, 2017 3:00 b 2
Arooryo suuban! Ku soodhowaada barnaamijkii subaxnimo ee Saaka & Dunida, waxaana saaka barnaamijka xarunta Daljir Garoowe inoo ka daadihinaya aw-Tall Axmed Shiikh Maxamed.
SAAKA & DUNIDA 608 Wararka 10033
Wasiir Yariisaw,”Boqolkiiba 30% Canshuurtii Saxda Ahayd Waa La Dhunsaday”
Abdikani mohamed mohamud 1 year
bahda radio daljir aad baan u salaamayaa waana ugaga mahadcelinayaa barnaamijyada Hagar la’aanta ah oo at dhagaystayaasha u soon bandhigto dhanka ciyaraha iyo wararkaba. gaar ahaan anigu waxaan kamid ahay dhagaystayaasha sida gaarka u dhagaysta barnaamijka saaka iyo dunida.
bartaa ka wada dadaalka waana mahadsantihiin